တောင်ငူသား: ချ နှင့် ရှ
ချ နှင့် ရှ
တစ်မြို့တစ်ရွာရောက်လို့ တောင်ငူသားတွေ စကားပြောတာကို ကြားရင် သတိထားမိတဲ့သူတစ်ချို့က ရယ်ကြတယ်။ တစ်ချို့က လှောင်ကြတယ်။ တစ်ချို့ကတော့ ဓလေ့တစ်ခုလိုမြင်ပြီး သဘောကျကြတယ်။ တောင်ငူမှာတော့ ကိုယ့်အရပ်နဲ့ကိုယ့်ဇာတ်မို့ တယ်ပြီး သတိမထားမိကြဘူး။ ဒီလိုပဲပြောနေဆိုနေ ရောင်းဝယ်နေကြတာပါပဲ။ တောင်ငူသူ တောင်ငူသားတိုင်းတော့လည်း မဟုတ်လောက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် အများစုကြီးက ဖြစ်နေလောက်မယ်။ တစ်ချို့တောင်ငူသားတွေတော့ လက်မခံကြလောက်ဘူးထင်တယ်။
အခြားမြို့ရွာတွေကို သွားခဲ့ပေမယ့်လည်း အလည်အပတ်ခရီးက ရက်တိုတိုသာမို့ အဲဒီဟာကို မသိခဲ့ပါဘူး။ ပထမနှစ် စတက်တော့မှ အခြားမြို့တွေက သူငယ်ချင်းတွေပါလာတော့ ကျွန်တော်စကားပြောတာကို သူတို့စနောက်ကြတော့မှ သတိထားမိသွားတယ်။ တောင်ငူဆိုပေမယ့် အနီးနားမြို့တွေလည်း ဒီလ်ိုပဲဖြစ်တတ်ကြပါတယ်။ တစ်မြို့လုံး တစ်နယ်လုံးရယ်တော့ ဟုတ်ဟန်မတူပါဘူး။ ကျွန်တော်ကတော့ အဲဒါကိုပဲ ကြံဖန်ပြီး ဂုဏ်ယူတယ်ဗျာ။ စနောက်ကြတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကိုလည်း ပြောရတယ်။ “ဟေ့ အဲဒါတောင်ငူသားစစ်စစ်တွေရဲ့ သင်္ကေတပဲကွ“ လို့လေ။ အခြားဒေသတွေကို ပြောင်းရွှေ့သွားတာ နှစ်နဲ့ချီ ကြာသွားပြီဖြစ်တဲ့ အချို့တောင်ငူသားတွေတော့ အဲဒါမျိုး မဖြစ်ကြတော့ဘူး။ တစ်ချို့လည်း မပြောင်းလဲစေဘဲ အဟောင်းမြဲနေတာ ရှိကောင်းပါရဲ့။
ဒုတိယနှစ်မတက်ခင် ရန်ကုန်မှာ ကျူရှင်တက်တော့မှ ဇာတ်လမ်းစတာဗျို့။ သချာင်္ကျူရှင်ကို မာမီဝေ (ကွယ်ရာမှာတော့ ယောက္ခမကြီး လို့ခေါ်တယ်၊ မာမီ့သမီးလေးတွေက အချောလေးတွေဗျ) ဆီမှာတက်တယ်လေ။ မာမီဝေဆိုရင် နောင်တော်အမတော်တွေ သိလောက်မယ်ထင်ပါတယ်။ မာမီဝေ့ကျူရှင်မှာ တောင်ငူကဆိုလို့ ကျွန်တော်တစ်ယောက်တည်း။ အိမ်စာပေးလိုက်လို့ နားမလည်တဲ့ပုစ္ဆာပါလာရင် နောက်နေ့ ကျူရှင်သွားတော့-
"Teacher, ဒီပုစ္ဆာနံပါတ် ချစ်က နားမလည်လို့ ကျွန်တော့်ကို ချင်းပြပါဦး"
လို့မေးလိုက်တယ်။ ရုတ်တရက်ဆိုတော့ ဆရာမလည်း ထင်မှာပေါ့။ ဒီကောင်လေး ဘယ်လိုမေးလိုက်တာလဲ။ ငါ့များနောက်နေလားလို့လေ။ လူပုံကြည့်တော့လည်း ကောင်လေးက တကယ့်ရိုရိုကျိုးကျိုးလေး (း-)။ ဒါပေမယ့် ဘာမှတော့ မပြောဘဲ သိချင်တာကို ပြန်ရှင်းပြတယ်။ နောက်ပိုင်းကျတော့ စာသင်ခန်းထဲမှာ ကျွန်တော် စာလှမ်းမေးတာမျိုးတွေ၊ သူငယ်ချင်းတွေနဲ့ စကားပြောတာမျိုးတွေကြားရတော့မှ မာမီဝေလည်း သဘောပေါက်သွားတယ်။ “သြော် ဒီကောင်လေးက ဒီလိုကိုး“ ဆိုပြီးတော့လေ။ အဲဒီနောက်တော့ ကျွန်တော့်ကို တွေ့တိုင်း ဘယ်နေရာမှာတွေ့တွေ့-
"ဟဲ့ သမက်ကလေး ရွတ်စမ်းပါဦး ခြင်.. ခြင်.. ကျွန်တော့် ခြင်ထောင်ထဲ မဝင်နဲ့" လို့တစ်မျိုး၊
လို့တစ်ဖုံ ပြောခိုင်းရွတ်ခိုင်းတော့တယ်။ (မာမီဝေက သမက်ကလေးခေါ်တာ သမီးအရင်းတွေနဲ့ သဘောတူလို့ မဟုတ်ဘူးဗျ၊ တပည့်မ မွေးစားသမီးတွေနဲ့။ မသိရင် တောင်ငူသား ဟုတ်လှချည်လား ထင်ကုန်မယ်)။ ကျွန်တော်ကလည်း တောင်ငူသံနဲ့
“ရှင်ရှင် ကျွန်တော့် ရှင်ထောင်ထဲ မဝင်နဲ့”
" ခြောက်သီးသုပ် ရှင်ရှင်လေး"
လို့ပဲ ထွက်တာကိုးဗျ။ ကျွန်တော်အဲလိုရွတ်ပြတိုင်း မာမီဝေခမျာ သဘောကျလွန်းလို့ တအားရယ်တော့တာပါပဲ။ အဲဒီမှားထွက်တဲ့ တောင်ငူသံကြောင့်ပဲ ကျောင်းက ဆရာ၊ဆရာမတွေထဲမှာ မာမီဝေနဲ့ ပိုပြီးရင်းနှီးခဲ့ရပါတယ်။ နောက်ပိုင်း ကျွန်တော်လည်း သတိထားပြီး စကားပြောတဲ့အခါ ပြင်ယူရပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ သတိထားထား တစ်ခါတစ်လေတော့ လွတ်ထွက်သွားသေးတာပဲ။ ကျွန်တော်တို့က ချ-သံ ရော၊ ရှ-သံ ကိုပါ နှစ်မျိုးလုံး ထွက်တတ်ပါတယ်။ ထွက်လို့ရတယ်။ အသံထွက်တဲ့နေရာမှာ ချ-သံ နဲ့ ရှ-သံ ကို မှားထွက်နေမိတာပါ။ ရှောက်ချိုသီး ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့က ချောက်ရှိုသီး လို့ထွက်မိနေတာမျိုးပါ။
အဲဒီဇာတ်လမ်းက ဒုတိယနှစ်အတွက် ရန်ကုန်မှာ တက်ခဲ့တဲ့ ကျူရှင်မှာတင် မပြီးသေးဘူးဗျို့။ ပြည်မှာ တတိယနှစ်တက်ရတော့ မာမီဝေလည်း ရန်ကုန်ကနေ တစ်ပါတ်စီ အလှည့်ကျ လာသင်ပေးရတယ်။ ပြည်ကျောင်းမှာ ကျွန်တော့်ကိုလည်းတွေ့ရော ဝမ်းသာအားရနဲ့ "ဟယ် သမက်ကလေး ရွတ်စမ်းပါဦး" တန်းပြောတော့တာပဲ။ တစ်ရက်တော့ မာမီဝေနဲ့ လူဆိုးထိန်း (မော်ကွန်းထိန်း) ဆရာတို့ စကားပြောနေကြတုန်း ကျွန်တော်ဘေးက အသာလေးခေါင်းငုံ့ဖြတ်မိပါတယ်။ မြင်မိအောင်မြင်တယ်ဗျာ။ လှမ်းခေါ်ပြီး ဆရာနဲ့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်သေးတယ်။ ဒါပေမယ့် တော်သေးတယ်။ မရွတ်ခိုင်းလိုက်လို့။ ကျွန်တော်လည်း အတန်းထဲသွားထိုင်နေလိုက်တယ်။ သချာင်္ချိန်စတော့ မာမီဝေ ဝင်လာတယ်။ သချာင်္ချိန်ဆိုရင် မေဂျာနှစ်ခု သုံးခုကို ပေါင်းသင်တာဆိုတော့ ကျောင်းသားတွေ အပြည့်ပါ။ အားလုံးနှုတ်ဆက်ပြီးကြလို့မှ မထိုင်ရသေးဘူး။ မာမီဝေတို့လုပ်ပုံကဗျာ။
"ဟဲ့ ခုနင်ကပဲ ငါ့သမက်ကလေး အပြင်မှာတွေ့လိုက်ပါတယ်။ ဘယ်နားထိုင်နေတုန်း"
တဲ့ဗျာ။ အားလုံးကလည်း ဟိုကြည့်ဒီကြည့်ပေါ့။ ဆရာမ ဘယ်သူ့ကိုများပြောသလဲပေါ့။ မကြာပါဘူးဗျာ။ တွေ့သွားရော။ အဲဒီတော့ ဘာဖြစ်ရမလဲ တစ်တန်းလုံး ရယ်တာပေါ့။ အကြောင်းမသိတဲ့သူတွေကတော့ ဒီကောင် ၃ တန်းပဲ ခုမှတက်မလို့ရှိသေး တယ်စွံပါလားပေါ့။ ကျွန်တော့်မှာသာ ကိုယ့်အဖြစ် ကိုယ်သာသိသမို့ သွားလေးဖြဲပြီး အသာလေးငြိမ်နေလိုက်ရတယ်။ နောက်ဆုံးရလဒ်ကတော့ဗျာ။ ပြည်မှာကျောင်းတက်တဲ့ တစ်လျှောက်လုံး တောင်ငူသားလေး ဘူပိတ်သွားရလေသတည်းဗျာ။
စာကြွင်း။ ။ Teacher မာမီဝေ သို့ အမှတ်တရ
Labels: ကိုယ်ပိုင်ဟာသ , ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ , တက္ကသိုလ် , တောင်ငူ
မင်းလေးလို့ ရှစ်လို့ - လို့ ဆိုတဲ့ တောင်ငူသား သူငယ်ချင်းကိုလည်း တွေ့ဖူးတယ်။
ကျနော်က င သတ်နဲ့ န သတ်။
(ဥပမာ - ခွန် ကို ခွင် လို့ထွက်တာ။)
သဘောကျလွန်းလို့။ ခုတော့ အချိန်မရှိတော့လို့ပါ။ နောက်မှ လာလည်ပါဦးမယ်။
ိ်ိဟုတ်တယ်ကြားဖူးတယ် တော်ငူသားတွေနဲ့စကားပြောဖူးတယ်း) ခုံသေးသေးလေးမဟူတ်ပဲ ခုံပေါက်စလေးလို့ ပြောတာလည်းကြားဖူးတယ် စိတ်တိုရင် “ဒီလူကြီးကတော့ဗျာ” ဆိုပြီးအသံလေးလေးနဲ့ ပြောတာလည်းတော်တော် ရယ်ရတယ် :P
တောင်ငူက သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကို ဒီနေ့ နင်တို့အိမ် ဘာဟင်းချက်လဲ မေးလိုက်တာ ရှင်ပေါင်ရွက် ရှင်ရေဟင်းဆိုလို့ ရယ်လိုက်ရတာ ခုထိမမေ့ဘူး။
ခြတောင်ဘို့ ပေါ်က ခြင်တစ်ကောင် ဆိုရင်ရော.... :P
You make me remember my teacher.
He is from Taungoo too.
It'sanice and funny post.
Please write about your PTU.
I'd like to read about it very much.
Tay Than Zin
ကိုတောင်ငူရေ.. အမ အမျိုးသားကတော့ပြောဖူးတယ်.. “ရှိုရှင်စားမယ်”တို့ “ရေရှိုးမယ်” ဆိုပြီး တောင်ငူက လူတွေက ပြောကြတယ်တဲ့.. နောက်ပြီး “ဗိုရင်” ဆိုတာလည်း ရှိသေးတယ်တဲ့... ပြော ပြောပြီး ရီနေတယ်.. သူလည်း တခါတလေ စကားပြောရင် မပီချင်ဘူး... :D :D
မာမီဝေဆိုလို့ မဝေကလေဆိုပြီးအမြဲစတတ်တဲ၊့ နင်နဲ့ငါကော်ဖီတူတူသောက်မယ် ငါ့မှာအများကြီးရှိသေးတယ်လို့ပြောတတ်တဲ့၊ သေတ္တာထဲမှာ အင်္ကျီတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတဲ့၊ ကျနော့ဆီက ဂျူးစာအုပ်တွေငှား ငှားဖတ်တတ်တဲ့ တီချယ့်ကို သတိရမိတယ်....
နောက်တစ်ယောက်က ရန်ကုန်မှာ ကျနော်နဲ့တစ်အိမ်ထဲနေခဲ့တဲ ကျနော့ သူငယ်ချင်း အရှစ်။ ကျနော်တို့က သူ့ကို အရှစ်လို့ပဲခေါ်ကြတာ။ သီချင်းဆိုရင်တော့ ပီလို့။ အဆိုကောင်းတယ်ဗျ။ စကားပြောရင်သာ.....အရှစ်ဖြစ်တော့တာ။
ွှတီချယ်ဝေဆိုတာ မင်းမနိုင်ကလား.. သူ့သမီးလေးတွေက ငယ်ပါသေးတယ်.. ကလေးလေးတွေပါ.. မဗေဒါလဲ စလုံးမလာခင်က အဲဒိမှာသချာင်္ကျူရှင်တက်ဖူးခဲ့သေးတယ်.. ဆရာမက နောက်တတ်တယ်.. အသင်အပြတော့ကောင်းတယ်.. ဖတ်ရင်းနဲ့လဲ ပြုံးသွားပါတယ်...
ကျွန်တော့် ရှင်တောင်ထဲ မ၀င်နဲ့နော်...
အခုမှ လိုက်ရှာရင်းတွေ့လို့ ဖတ်မိတယ် အရမ်းသဘောကျတယ် တောင်ငူကိုလွမ်းလှပြီ မပြန်ခဲ့ဖြစ်တာလည်း ဆယ်နှစ်ရှိပြီလေ
အခုလို့တွေ့ရ ဖတ်ရတာ ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်
ကျနော်ကတော့ ကိုယ်စကားမပီတာကို ဘယ်တော့မှ မပြင်ဘူး သူများတွေလှောင်လည်း ကျနော်မရှက်ဘူး
ဒါက တောင်ငူသူ တောင်ငူသားစစ်ကြောင်းပြတာလေ
Ko Zani must be from Pakokku or Myingyan....:)